Tababaraha Manchester United Oo Ka Hadlay Qaladkii Uu Sameeyay Jesse Lingard
HomeWararka CiyaarahaTababaraha Manchester United oo ka Hadlay Qaladkii uu Sameeyay Jesse Lingard
September 15, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska 0
Ole Gunnar Solskjaer iyo Harry Maguire ayaa labaduba taageeray xiddiga qadka dhexe ee Manchester United Jesse Lingard si uu uga gudbo qaladkii uu ku galay Young Boys xalay.
Iyadoo dhibcaha lagu kala nastay 1-1, Lingard oo bedel ku soo galay ayaa hadiyad u siiyay guushii kooxda Switzerland ka dib markii uu marin-habaabiyay marin-habaabin qoto dheer galay waqtigii dhimashada.
Solskjaer ayaa yiri ciyaarta kadib, “Taasi waxay ku dhacdaa ciyaar walbo, taasi waa kubbada cagta caalamka.
“Waxaad haysataa daqiiqado waaweyn, waxaad haysataa daqiiqado adiga kaa soo horjeeda. Wuxuu xamili doonaa midkaas.
Maguire ayaa raaciyay: “Jesse, ma jiro ciyaaryahan kubbada jecel oo khaladaad sameeya laakiin sida iska cad waa qeyb ka mid ah ciyaarta, waxaan nahay bini’aadam, ciyaaryahan walba oo kubad sameeya wuu qaldamaa, isaga ayaa wax ka baran doona.